Tilmaamaha Suuqgeynta B2B oo Dhamaystiran Slideshare | Martech Zone
Ma hubo inaad ka heli doontid dood dhammaystiran oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo istaraatiijiyadaha ka dambeeya adeegsiga Slideshare ee suuqgeynta B2B Tilmaamaha A-to-Z ee SlideShare ka Feldman Creative. Isku darka maqaalka oo dhammaystiran iyo ka hooseeya sawir-qaadista ayaa ah kuwo cajiib ah.
SlideShare waxay bartilmaameedsaneysaa dadka isticmaala ganacsiga. Taraafikada SlideShare badanaa waxaa wada raadinta iyo bulshada. In kabadan 70% waxay ku yimaadaan raadinta tooska ah. Gaadiidka ka yimaada milkiilayaasha meheradaha ayaa 4X ka weyn Facebook. Taraafikada runti waa mid caalami ah. In ka badan 50% ayaa ka yimid dibedda Mareykanka
Waxaa jira fursad la yaab leh oo looga faa'iideysan karo barxadda bandhigga… laakiin sida ku cad Warbixinta Warshadaha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada 85% suuqleyda ma adeegsadaan SlideShare. Waxaan u adeegsanaa Slideshare kuna dhiirrigeliya macaamiisheenna sidoo kale! Waa madal fantastik ah oo lagu wadaago waxyaabaha muuqaalka ah.
Tilmaamaha la bixiyay ka sokow, waxaan jeclaan lahaa inaan mid kale ku daro! Markii aan u horumarinayno macluumaad-siinta macaamiisheenna, waxaan inta badan horumarinnaa nooc bandhig ah oo ah infographic si loogu isticmaalo Slideshare iyo dhiirrigelinta koontada shirkadda 'LinkedIn'. Dib-u-beddelka sawiradaada macluumaadka iyo xitaa waraaqaha cad ee loo adeegsado Slideshare waxay ballaarin kartaa gaaritaanka waxyaabaha aad ka shaqaysay, taas oo kordhinaysa soo celinta maalgashiga!
Tags: suuqgeynta b2btusaha suuq geynta b2bfeldman hal abuurhage slideshareslidesharehage slidesharesuuq geynta slideshareHagaha suuq geynta slideshareHagaha a-to-z ee slideshare
Khaladaadka Suuqgeynta ee Warbaahinta Bulshada waa inaad iska ilaalisaa
Jul 5, 2015 markay tahay 8:51 PM
Waan ku faraxsanahay waana ku faraxsanahay inaad qaawisay qormadeyda iyo faafaahinteyda, aad ku taageertay sida xamaasadda leh oo aad ula wadaagtay MTBers-ka. Waxaan rajeynayaa in qof kastaa soo qaato dhowr tilmaamood, iyo tan ugu muhiimsan, tijaabooyinka SlideShare.
Jul 5, 2015 markay tahay 10:02 PM
Waxyaabo fiican, Barry! Wayyyyy baa aad u dheeraatay. Waxaan u baahanahay inaan kuugu soo dejiyo Podcast-ga ugu dhakhsaha badan!